Ukuqhaqhazela Kweqe Isibalo Sababhalisile Esisigidi Esinye | iHoror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukuqhaqhazela Kudlulele kuMark Oyisigidi Esibhalisile
Izindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoUkuqhaqhazela (i-movie)
Ukuqhaqhazela Kudlulele kuMark Oyisigidi Esibhalisile
ebhalwe ngu Waylon Jordan September 22, 2020
Isevisi yokusakaza ethusayo / eyethusayo ye-AMC, uShudder, umemezele namhlanje ekuseni ukuthi sebedlule uphawu lobhaliso oluyisigidi esingu-1. Le nsizakalo ibilokhu ibakha kancane kancane ubulungu bayo selokhu yaqala ukutholwa ngumphakathi emuva ngo-2016, kepha yabona ukwanda okukhulu ngonyaka odlule ngokufakwa kohlelo lwayo lokuqala lohlelo.
"Ukwengezwa kochungechunge lwangempela namabhayisikobho kuthuthukise ukukhula kwethu futhi kwaguqula iShudder yaba insizakalo okumele yenziwe yinoma ngubani onentshisekelo yokuzijabulisa okukhulu, okujabulisayo noma ukuzijabulisa okungaphezu kwemvelo," kusho uMiguel Penella, uMongameli we-AMC Networks SVOD esitatimendeni esisitholile namhlanje ekuseni. “Ukugxila kwethu okungapheli ezinhlelweni zekhwalithi, okuqukethwe okusha nokuthola abadali abahamba phambili nabezayo kusize uShudder ukuthi aqale ezweni eligcwele lezinsizakalo zokubhalisa. Impumelelo kaShudder iza njengoba ezinye izinsizakalo zethu ezihlosiwe ze-SVOD — i-Acorn TV, iSundance Now ne-UMC — ziqhubeka nomfutho wazo wokukhula kwababhalisile onamandla ngabalandeli abathanda kakhulu ngokuqukethwe abakuthanda kakhulu. ”
Lokho okuqukethwe kufaka uchungechunge lwangonyaka odlule lwe-anthology I-Creepshow, ngokususelwa kwifilimu yasekuqaleni kaGeorge A. Romero / Stephen King yango-1982 kanye nakulo nyaka Host, ifilimu ebhaliwe, yadutshulwa, futhi yakhishwa emavikini angu-12 kuphela ngesikhathi sokuhlukaniswa okulinganiselwa njenge-movie engu- # 1 yonyaka kumaTamatisi Abolile.
UGiancarlo Esposito esiqeshini sokuqala se-Shudder's I-Creepshow
Ngaphezu kohlelo lwabo lokuqala nolukhethekile, baphinde bavuselele amafilidi abo amafilimu akudala nasenkolweni njalo ngenyanga ukugcina iminikelo yabo isha futhi ababhalisile bebuyela kokunye.
Isevisi yokusakaza iphinde yafaka ukunwetshwa kwayo ezindaweni ezintsha ngokusiza ukukhula kwayo kokubhalisile. Ngesikhathi itholakala okokuqala, iShudder yayitholakala kuphela e-US, Canada nase-UK kepha selokhu yasakazekela eJalimane futhi ngasekuqaleni konyaka bathuthela eNew Zealand nase-Australia. Abasebenzisi bangabuka nge-site yabo eku-inthanethi, kepha isevisi iyatholakala naku-Roku, Fire TV, Apple TV, naku-XBox kanye nokuba neziteshi zabo "kuhlelo lokusebenza lwe-Apple TV naku-Amazon Prime ezindaweni ezithile.
Ungumbhalisi weShudder? Sitshele ukuthi yini oyithandayo ngakho kumazwana!
I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-9-22-20
IHulu's 'Run' Ifaka uSarah Paulson Imisa Usuku Lokukhishwa Lwezi-Novemba